हेर्नुहोस आजको राशिफल : हरिबोधनी एकादशीको दिन कुन राशि भएकाहरुलाई शुभ ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : हरिबोधनी एकादशीको दिन कुन राशि भएकाहरुलाई शुभ ?
Khabar house | १० मंसिर २०७७, बुधबार ०१:३९ | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : वि.सं.२०७७ साल मंसिर १० गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर २५ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्री शाके १९४२ । कार्तिक शुक्लपक्ष । तिथि–एकादशी, ५९ घडी २५ । नक्षत्र–उत्तरा भाद्रपदा, ३४ घडी ५९ पला, बेलुकी ०८ बजेर ३३ मिनेट उप्रान्त रेवती । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ३३ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ०६ मिनेट । दिनमान २६ घडी २२ पला । हरिबोधनी एकादशी ।
मेष : व्यापार व्यावसायमा प्रसस्त समय दिएपनि आम्दानी थोरै नै हुनेछ । कामगर्दा ख्याल गर्नु जरुरी देखिन्छ, समयमा कामहरु सम्पन्न नहुदा मान सम्मानमा आ’घात पर्न सक्छ । पढाइ लेखाइमा तपार्ईँ आफ्नै कारणले बि’ग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । यात्राको गतिलो सम्भावना रहेको छ भने विदेशी सामानको व्यापार फ’स्टाएर जानेछ । माया प्रे’ममा अ’विश्वास बढ्नेछ भने सामान्य स्वास्थ्य सम्वन्धी स’मस्या आउने योग रहेकोछ ।
बृष : व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ भने प्राकृतिक स्रोत साधन तथा पै’त्रिक धन सम्पति परिचालन गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा मन जानेछ भने बैकिङ क्षेत्रको लगानी फस्टाएर जानेछ । प्रे’म प्रशङमा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट काममा सहयोग हुने हुनाले लगानी बढाउँन सकिनेछ ।
मिथुन : आज गरीएको लगानी फ’स्टाएर जाने हुनाले व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिने छ । नयाँ काम खोज्दै हुनु हुन्छ भने समयले रोजगार दिलाउने तथा कामका बढुवा हुनेयोग रहेको छ । पढाइ लेखाइमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । माता पि’ताको सहयोगले राम्रा काम गरी समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । गीत संगित क्षेत्रमा रुचि बढ्ने हुँदा केहि समय रमाईलोतिर पनि समय खर्च हुनेछ ।
कर्कट : ध’र्म, सस्कृति तथा आफ्नो रितिरिवाजको जगेर्ना गर्ने काममा समय खर्चनु पर्नेछ । पढाइ लेखाइमा फड्को मार्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । सामाजिक काम गरी पुरस्कृत हुने योग रहेकोछ। साथिभाई तथा आफन्तहरु को सहयोग पाइने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ भने नयाँ काम गरी आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । समयले साथ दिने हुनाले मन प्रशन्न रहने तथा भाग्य बृद्धि हुनेछ ।
सिंह : समय तथा परिस्थिती अनुशार नचल्नाले दुख पाइनेछ । व्यापार व्यावसायमा समय दिन नसक्दा घाटा लाग्ने योग रहेको छ । माया प्रे’ममा धो’का हुनेछ भने पति दाम्पत्य जीवनमा घटपट आउने छ । सामान्य स्वास्थमा स’मस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । पढाइ लेखाइमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउनेछ । भौतिक सम्पतीको प्रयोग गर्दा वा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा तथा चलाउदा ध्यान दिनुहोला ।
कन्या : जीवन साथीको सहयोगले नाँफामुलक व्यावसाय सुरु गर्न सकिनेछ भने लामो दुरिको व्यावसायिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । मानव निर्मित भौतिक सम्पती तथा विलासी सामान प्राप्त हुनेयोग रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा अरु लाई किनारा लगाउदै आफन्त तथा गुरुहरुको नाक राख्न सकिनेछ । माया प्रे’ममा रामाउन चाहने हरुले सँगै बसेर भलाकुसारि गर्न पाउने समय रहेकोछ ।
तुला : पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई हराउदै नतिजा तपार्ईँ आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । सत्रु परास्त हुने छन् भने तपार्ईँको खैरो खन्नेहरु आफै साईड लाग्ने छन् । बिवादित विषयहरुको निर्णय तपार्ईँ आफ्नै पक्षमा आउँने हुनाले खुसीले उचाई नाघ्नेछ । पुराना सापटी तथा लेनदेनका मुद्दाहरु सल्टाउन सकिने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । मा’या गरेको मानिसबाट उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ ।
बृश्चिक : आ’कस्मिक धन तथा सम्पती लाभ हुने समय रहेको छ । शेयर बजार तथा चिठ्ठाको व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने खाद्यान्न तथा मेडिकल व्यावसायमा लगानी गरी धन सम्पति कमाउन सकिने छ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने आत्मिय मित्रको साथ रहने हुनाले महत्वपुर्ण उपलव्धी हासिल गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा सन्तानबाट तपार्ईँको काममा सहयोग हुने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
धनु : घरजग्गा तथा सवारी साधनको खरिद बिक्री गर्दा ध्यान दिनुहोला घाटा लाग्न सक्छ । बिद्यामा सन्तोषजनक प्रगती भएर जानेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आ’लोचनात्मक समर्थन रहनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय भने फस्टायर जानेछ । आमा तथा आमासरहका मानिससँग मन मु’टाव वढ्नेछ । विश्वास गरेकाहरु बाट धो’का हुनसक्छ सजक रहनुहोला । वाहिरी वातावरणसँग जुध्न नसक्दा छा’ती स’म्वन्धी स’मस्या आउँन सक्छ ।
मकर : आफन्त तथा दाजुभाईको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । न्या’यिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । लेखन कलाको माध्ययमले आफ्ना भनाईहरु जनमानसमा लैैजान सकिनेछ । पढ्न लेख्न मन लाग्नेछ भने नतिजा तपार्ईँ आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ । पराक्रम बढेर जाने हुनाले साहसिलो काम गर्न जागर आउनेछ । प्र’णय स’म्बन्धमा बिस्वासको वाताबरण बढेर जानेछ भने जीवन साथिको सहयोगले राम्रा कामहरु हुनेछन् ।
कुम्भ : सामाजिक काम गरी नाम तथा दाम कमाउन सकिनेछ भने समाजमा सम्मानित हुने योग रहेको छ । पढन पाढनमा मन जाने हुनाले स्कूल तथा कलेजमा तपार्ईँ को नाम अग्र स्थानमा आउने छ । शुभ समाचारले मनमा थप उत्साह जगाउनेछ भने नयाँ काम थालनी गर्दा भविश्यमा मनग्गे धन लाभ हुनेछ । प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुले भरपुर रमाईलो गर्न सक्नेछन् । पारिवारिक माहोलमा जमघट भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
मीन : कामहरु स्वत स्फुर्त रुपमा अगाडी बढ्नेछन् । व्यापार व्यावासाय फ’स्टाएर जाने तथा नयाँ प्रकृतिको व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ। राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । मा या प्रे’मको डो’रो क’सिलो हुनुको साथै घर परिवारमा बिग्रेको स’म्बन्ध सुधार भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा मिष्ठान्न भोजनमा साथ रमाईलो गरी समय कटाउन सकिनेछ । आजको दिन शुभ रहोस ।